Dear Friends, We hope everything goes well with you. The holidays are coming soon and we would like to take this chance to send greetings to you: Hope that 2022 can be a remarkable year to you and Happy New Year! Wish you and your family happiness and prosperity in 2022 with good cheer and succes...Lire la suite »
Before the New Year holiday, Our Wire Mesh Conveyor Shot Blasting Machine is ready for shipment， to our fasterner, bolt & nut customer in USA. perfect ending this year. Thank you for the customers’ trust all the time. We will take practical action to provide the best quality...Lire la suite »
Fiarovana ny fikojakojana ny fantsom-baravarana amin'ny fantsom-baravarana ho an'ny fika
Ny milina fipoahana mitifitra izany dia mihatra amin'ny fantsom-pifandraisana sy hery hafa mandritra ny famokarana sy ny fandidiana mahazatra, ary hitafy ao amin'ny lava-bavany. Aleo hazavaintsika ny fitandremana fikojakojana ny efitrano fitaterana ny milina fanapoahana fitifirana fitifirana. Mba hanadiovana ny bera dia aza mihodina izany ho ...Lire la suite »
Ireo serivisy manokana momba ny milina fipoahana mitifitra catenary
1. Mamolavola sy manamboatra fototra milina fanapoahana baomba tsy manara-penitra ho an'ny mpanjifa. 2. Araka ny fiasam-peo samihafa amin'ny mpanjifa, ny fampitaovana manokana fipoahana ny motera mitifitra basy. 3. Alao ny mpanjifa ny fantsom-basy fitifirana nitifitra ho an'ny mpanjifa. 4. Namboarina ...Lire la suite »
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny fantsona vy mitifitra fipoahana baomba?
Ny rindrina anatiny misy ny fantsona vy misy ny saika anatiny amin'ny fantsom-basy mitifitra blasting milina fipoahana dia mbola somary sarotra ampitahaina amin'ny rindrina ivelany. Tsy misy ny fanadiovana mety amin'ny rindrina ivelany, ary ny fanadiovana ny mari-pahaizana dia tsy misy fiatraikany tsara amin'ny rindrina ivelany. Th ...Lire la suite »
Ahoana no nitifitra vary main'ny rivotra milina hiatrehana vy tifitra diloilo?
Ny tifitra vy vita amin'ny menaka dia tsy maintsy alefa amin'ny rivotra rehefa voatsabo amin'ny milina fanapoahana basy, raha tsy izany, dia hisy fiantraikany mivantana ny fitsaboana. 1. Ny coating workpiece, fitsaboana alohan'ny fifamatorana, ny fipoahana mitifitra dia afaka manala ny loto rehetra toy ny haingon-trano eo amin'ny velarinan'ny work work, ary manangana ...Lire la suite »
Sambatra ny taona vaovao 2019!
Post fotoana: 03-07-2019
Ry Namana, Manantena izahay fa ny zava-drehetra mitranga tsara amin'ny lafiny. Fety no avy tsy ho ela, ary tianay ny haka izany fahafahana hiarahaba anao. Mirary anao ho tsara toetra 2019! Happy taona vaovao ~ maniry anao sy ny fianakavianao tamin'ny fahasambarana sy fanambinana 2019 amin'ny fifaliana sy ny fahombiazana. Misaotra anao...Lire la suite »
Agent in Malezia ho nitifitra vary main'ny rivotra milina
Post fotoana: 01-08-2019
dx-fipoahana nandritra ny taona maro amin'ny alalan'ny famolavolana, ny fikarohana sy ny fampandrosoana, dia afaka mpanamboatra sy manome ny be dia be isan-karazany ny fipoahana milina hitsena ny mpanjifa 'fepetra. Isika maka fotoana izany hoe, dia manana mpiasa ho an'ny tifitra vary main'ny rivotra milina ao Malezia, raha manam-potoana, azafady mandoa Vis ...Lire la suite »
Voatifitra Auto Fipoahana Machine nanomana sambo ho any Malezia
Post fotoana: 01-07-2019
Voatifitra Auto Fipoahana Machine nanomana sambo ho any Malezia Lire la suite »
New Development ny Voatifitra vary main'ny rivotra Machines ao Shina
Shot vary main'ny rivotra maty milina-nanarato orinasa dia iray amin'ireo zava-dehibe fanohanana indostria fiara orinasa. Efa akaiky mifandray amin'ny fampandrosoana ny fiara orinasa. Ny fampandrosoana haingana ny fiara orinasa tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nahatonga ny tifitra vary main'ny rivotra haingana maty milina exagg ...Lire la suite »
Sambatra ny taona vaovao 2018!
Ry Namana, Manantena izahay fa ny zava-drehetra mitranga tsara amin'ny lafiny. Fety no avy tsy ho ela, ary tianay ny haka izany fahafahana hiarahaba anao. Mirary anao ho tsara toetra 2018! Happy taona vaovao ~ maniry anao sy ny fianakavianao tamin'ny fahasambarana sy fanambinana 2018 amin'ny fifaliana sy ny fahombiazana. Misaotra ...Lire la suite »
Common Olana sy vary main'ny rivotra Vahaolana ny Voatifitra Machines (2)
Fanantenana azo mahita ny valiny mba hamahana ny olana ny Shot vary main'ny rivotra Milina: Fahaefatra, ny fanadiovana ny vary main'ny rivotra vokany milina fanadiovana dia tsy tonga lafatra 1. ny tifitra dia tsy ampy ny famatsiana. New tifitra dia tokony ho araka ny tokony ho nanampy. 2. Ny vary main'ny rivotra voatifitra tari-dalana dia tsy marina. Ny toeran'ny ...Lire la suite »
Voatifitra vary main'ny rivotra Machine , Fipoahana Track Shot Blaster , Floor nitifitra Fipoahana Cleaning Machine , Hook Shot vary main'ny rivotra Machine , Sina Shot vary main'ny rivotra Machine , Road Suface Shot vary main'ny rivotra Machine ,